Kukosha kwakadzikira kweiyo nyowani Apple Watch Series 6 GPS 44mm | Ndinobva mac
Yakakosha kuderedzwa kweiyo nyowani Apple Yekucherechedza Series 6 GPS 44mm
Pasina kupokana iwe unofanirwa kutarisisa kune izvo zvinogona kupihwa zvekutenga chero chigadzirwa asi kana ari maApple zvishandiso zvimwe. Uye hazviwanzo kuwanika mitengo yakanaka kana kudzikisira pazvigadzirwa zvitsva kubva kuCompertino firm, saka kukwidziridzwa kana kupihwa seizvi kune iyo 6mm Apple Watch Series 44 hazvigoni kushaikwa.
Mune ino kesi, kukwidziridzwa kunoshanda kune yazvino Apple Watch modhi yakaburitswa naApple, mune yesirivheri-yemavara aluminium kupera. Ndezve imwe-nguva uye shoma-nguva dhisikaundi iyo mune ino kesi tinoiwana pane inozivikanwa online yekutengesa webhusaiti Amazon.
Iyi Apple Watch Series 6 modhi mu44mm ine GPS uye aluminium kesi mune sirivheri ruvara ine 7% dhisikaundi ichienzaniswa nemutengo wepamutemo wekutengesa pawebhusaiti yeApple. Iyo inogona zvirokwazvo kunge iri nguva yakanaka yekuenda kwayo, nekuti iri mhando nyowani uye mutengo wayo wakaderera zvakanyanya pane webhusaiti yepamutemo.
Kune kumwe kukwidziridzwa pane mamwe mapeji einternet, asi mune ino chinhu chakakosha ndechekuti chitoro chemasaini muAmazon chaimo uye isu tese tinoziva chaicho chinhu chekuita kana paine dambudziko nekutakura, chishandiso uye chigadzirwa warandi. Hazvina kufanana kutenga kubva kune webhusaiti nemutengo wakaderera usingatarise kufukidzwa kwechigadzirwa kana paine dambudziko, pane kutenga kubva kuAmazon. Izvi zvakaderedzwa Apple Watch inogona kunge iri sarudzo yakanaka kune vazhinji vashandisi uye chokwadi ndechekuti vane mamwe ese akasara mavara akaderedzwa kunyange zvakadaro kwete zvakanyanya senge sirivheri modhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yakakosha kuderedzwa kweiyo nyowani Apple Yekucherechedza Series 6 GPS 44mm
"Dhizaini nyowani" yaDan Riccio kuApple ndeyechokwadi magirazi
Pixelmator Pro inovandudzwa pamwe nekuvandudzwa kwakawanda mushanduro yayo 2.0.5